अनुसन्धान अधिकारीलाई नै चकित बनाउने अञ्जना हत्याकाण्डः मानिस यति क्रुर पनि हुनसक्छ ? « हाम्रो ईकोनोमी
तर, जेठाजुद्वारा बुहारीको हत्या गरिएको घटनाले उनलाई चकित बनाएको छ । ‘जागिर खाएको यत्रो वर्ष भइसक्यो ।
यस्तो विभत्स घटना देखेको थिइन’, डीएसपी खिउजु भन्छन् ।
घटनास्थल हेर्दा एउटा प्रहरी अधिकारीकै आङ सिरिङ हुन्छ भने सर्वसाधारणलाई कस्तो लाग्दो हो ? घटना हो, बिहीबार दिउँसो ललितपुरको ढोलाहिटीमा भएको अञ्जना महत हत्या ।
प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्दा उनको टाउको थोरै छालाले मात्रै शरीरमा अड्किएको थियो ।
खुट्टाले भुइँ छोए पनि आधा शरीर खाटमै थियो । कोठामा रगतको आहाल थियो । अञ्जनामाथि कति पटक हतियार प्रहार गरियो भन्ने लख काट्नसमेत मुस्किल छ ।